आमासंग शारीरिक सम्पर्क गरेको युवक नै छोरी माग्न आएपछि… ! – PathivaraOnline
Home > समाज > आमासंग शारीरिक सम्पर्क गरेको युवक नै छोरी माग्न आएपछि… !
admin July 23, 2019 समाज	0
काठमाडौं । एक युवकले सामाजिक सञ्जालमा डेटिङको सबैभन्दा आश्चर्य पार्ने घटना सेयर गरेका छन् । घटना पढ्दा सबैलाई अचम्म लाग्यो । उनीहरुले यसलाई कुनै कथाभन्दा कम ठानेका छैनन् । आखिर के हो त घटना ?टिन्डर(डेटिङ एप्लिकेसन/वेबसाइट)मा म्याच भएपछि एक केटीसँग केटाको प्रेम बस्यो । गर्लफ्रेन्डले आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाए । तर त्यहिँ साँझ उसले जीवनमा नसोचेको घटनाको सामना गर्नुपर्यो ।
२१ वर्षको युवकले केहीवर्षपहिला ४० वर्षीया महिलासँग सम्बन्ध राखेका थिए । एक बारमा भेटिएका दुईको सम्बनध शारीरिक सम्बन्धसम्म पुगेको थियो । बारमा भेटिएको महिलासँगको केही महिनापछि युवकले डेटिङ साइट टिन्डरमा १९ वर्षकी केटीसँग भेट्यो र दुवैको प्रेमसम्बन्ध शुरु भयो । दुवैबीचको सम्बन्ध यति राम्रो भयो की केटीले केटालाई आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाइन् ।
तर, केटीको घरछेउ पुगेपछि केटाको होस उड्यो । केटाले देखेको घर त्यहि थियो जहाँ उ गर्लफ्रेन्डको आमासँग आइसकेको थियो । केटाले दुःखी हुँदै आफ्नो सबैकुरा गर्लफ्रेन्डलाई बतायो । शुरुवातमा गर्लफ्रेन्डलाई मजाकजस्तो लागिरहेको थियो । तर युवकले उसको आमाको नाम नै भनिदिएपछि केटीले उसको कुरामा विश्वास गरिन् । त्यसपछि उनीहरुको ब्रेकअप भयो । युवकले सोसल साइट रेड्डिटमा आफ्नो नाम नलेखि यसरी पूरा घटना लेखेका छन् ।
ल हेर्नुस् त, यस्तो गाउँ, जहाँ बिहे गर्न केटा नपाएर धपक्क बलेको जवानी खेर!
दिल निसानीकाे निशाना राष्ट्रपतितर्फ- साेफाकाण्डमा यस्तो लेखेपछि सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला